Dhageyso: 10 katirsan Ciidamada Dowladda Ee Gobolka Gedo oo iska dhiibay degmada Ceel cadde.
Wednesday May 01, 2019 - 13:40:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
illaa 10 askari oo kasoo goostay degmooyinka Baardheere iyo Garbahaarey ayaa iyagoo hubkooda wata isku dhiibay maamulka islaamiga degmada Ceelcadde.
sawir hore ciidamo isku dhiibay alshabaab
Maxamuud Maxamed Ibraahim, Aadan Axmed Jilacoow iyo Isxaaq Aadan Ibraahim ayaa kasoo goostay saldhigga ciidamada dowladda ee degmada Garbahaarey halka 7 kale ay ka goosteen dhanka degmada Baardheere waxaana dhammaantood lagusoo bandhigay xarunta wilaayada Islaamiga Gedo
Ciidamada isku dhiibay Al Shabaab ayaa warbaahinta u sheegay in si heer sare ah loosoo dhoweeyay islamarkaana loo lacageeyay hubkii ay kalasoo goosteen dhanka Xabashida Itoobiya iyo maamulka Axmed Madoobe.
Qaar kamid ah ciidamada isdhiibay ayaa sheegay in xaalado adag ay kala kulmeen safka Xabashida Itoobiya sida raashin xumo,mushaar la'aan iyo amarro adag oo ay duldhigayeen ciidamada Itoobiya.
Dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa isbuuc walba iska dhiibay maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka kuwaas oo ka towbad keenaya wadashaqeyntii ay lalahaayeen ciidamada shisheeye.
Halkan ka dhageyso Ciidamada isdhiibay oo warbaahinta kula hadlay Ceelcadde MP3